ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းတော်မူသောစာအုပ် | The God Breathed Book | Real Conversion
နိူဝင်ဘာလ ( ၃၀) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
“ထိုကျမ်းစာရှိသမျှသည် ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းတော်မူသောအားဖြင့်ဖြစ်၍၊ ဘုရားသခင်၏လူသည် စုံလင်သောသူ၊ ကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးတို့ကို ပြုစုခြင်းအလို့ငှါပြင်ဆင်သောသူဖြစ်မည်အကြောင်း၊ ဩဝါဒပေးခြင်း၊အပြစ်ကို ဖော်ပြခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်စွာပြုပြင်ခြင်း၊ တရားကိုသွန်သင်ခြင်း၊ ကျေးဇူးများကို ပြုတတ်၏။” ( ၂ တိ ၃း ၁၆၊ ၁၇ )
သမ္မာတရားအတွက်ရပ်တည်ရန်ကြောက်ရွ့နေသော တရားဟောဆရာတစ်ဦးက ကျွန်တော်ကို “ရပ်ဘယ်ရိုဆာ” တစ်ယောက်လို့ခေါ်ခဲ့သည်။ သူတို့၏ဝမ်းစာအလုပ်ကိုသာအာ ရုံစိုက်လုပ်ဆောင်နေသောတရားဟောဆရာများက ကျွန်တော်ကို “ အယူသည်းသမား” ဟု လည်းခေါ်ကြသည်။ အသင်းတော်၌ရှိသောအသင်းသူအသင်းသားများကိုသာကျေနပ်စေရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် တရားဟောဆရာများက “ပြဿနာကောင်” ဟု ကျွန်တော်ကို ခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိကြသည်။ ထို့ပြင် သမ္မာကျမ်းစာခုခံကာကွယ်ခြင်းနှင့်ပါတ်သက်၍ ဘာမျှလုပ် ဆောင်ခြင်းမရှိသောအသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များကမူ “ အစွန်းရောက်ဝါဒီသမား” ဟုခေါ်ကြ သည်။
သမ္မာတရားအပေါ် ကျွန်တော်၏ရပ်တည်မှုမှာ တစ်ပြေးညီးတည်းဖြစ်ပါသည်။ အစမှ အဆုံးတိုင်အောင်သမ္မာကျမ်းစာတစ်ခုလုံးသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပါတ်တော်၊ ဟေဗြဲနှင့် ဂရိစကားလုံးတစ်လုံးချင်းစီသည် “ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းထားခြင်း” ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်အ မြဲပြောလေ့ရှိပါသည်။ ( ၂ တိ ၃း ၁၆ ) တောင်ပိုင်းနှစ်ခြင်းအသင်းတော် ခေါင်းဆောင်များက ထိုသို့သာဆက်လက်ပြောဆိုနေလျှင် အသင်းတော်ထူထောင်နိူင်မည်မဟုတ်ကြောင်းကို ကျွန်တော်ကိုပြောခဲ့ကြသည်။ ဤသို့ဖြင့် ကျွန်တော်သည် ဖန်တမင်တယ်လ်နှစ်ခြင်းဖြစ်လာပြီး ဖန်တမင်တယ်လ်စွဲလန်းသူဟုခေါ်ကြကာ တောင်ပိုင်းလီဗရယ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်က ကျွန် တော်ကိုစတင်တိုက်ခိုက်ကြလေတော့သည်။
ရိုက်မင်အယူဝါဒက King James ကျမ်းစာရှိစကားလုံးများသည် မှုတ်သွင်းခြင်းအား ဖြင့်ပေးထားပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာတွင်အမှားအယွင်းမရှိဟု ခံယူသောယုံကြည်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ အချို့တို့က KJV တွင်ရှိသောအင်္ဂလိပ်စကားလုံးများသည် ဂရိနှင့်ဟေဗြဲစကားလုံးကို အမှန်ပြင် ဆင်သည်ဟုတောင်ပြောကြသည်။ ဤသို့ ထူးဆန်းပြီး စာတန်၏လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ၁၉၅ဝခုနှစ်အထိ အဘယ်သူမျှယုံကြည်လက်ခံထားခြင်းမရှိပါ။ သို့သော် (၁၉၂၁-)ခုနှစ်တွင် Dr. Peter S. Ruckman က ပြန်လည်အသက်သွင်း၍ ခေတ်စားလာစေသည်။ ရိုက်မင်ဝါဒက အထူးသဖြင့် ကိုယ့်အားကိုကိုး ဖန်တမင်တယ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်များကို ကွဲပြားစေသည်။ ထိုစာအုပ်နှင့်ပါတ်သက်၍ “ ရိုက်မင်ဝါဒဖော်ပြချက်” ဟူ၍ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ကျွန်တော်ရေး သားခဲ့သည်။ ထိုစာအုပ်ကို rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြင့် ကျွန်တော်ထံ စာရေးသားမှာယူ နိူင်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာဘာသာပြန်ခြင်းများကို ဟေဗြဲ နှင့်ဂရိဘာသာကိုအသုံးပြုခြင်းထက် အင်္ဂလိပ်၊ စပိန်၊ ကိုးရိယား၊ ရုရှ၊ နှင့်အခြားဘာသာစကားများကိုအသုံးပြုကာ ကမ္ဘာတဝှမ်း ရိုက်မင်ဝါဒဖြင့် စာတန်နှင့်မှားယွင်းသောဩဝါဒကိုမြင့်တင်ကြပါသည်။ ဒေါသဖြစ်နေသောရိုက် မင်ဝါဒရှိသူကထိုသို့ပြောဆိုခြင်းကြောင့် နှစ်ခြင်းကျမ်းစာကျောင်းတွင် ခွန်အားပေးဟောကြား ခြင်းကို ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့သည်။ နယူယောက်မြို့ရှိ ဒေါသဖြစ်နေသောတရားဟောဆရာက ထိုသို့ ပြောဆိုခြင်းကြောင့် ပယ်ဖျက်လိုက်သည်။ ကျွန်တော်အမျိုးသမီး၏ဖခင်နှင့်အရမ်းရင်းနှီးသော သူငယ်ချင်း၏သားသည် ထိုလူ၏အသင်းတော်သို့သွားခဲ့သည်။ သူသည် ကျွန်တော်ကို အပုတ် ချခဲ့သာမက ကျွန်တော်နှင့်ပါတ်သက်ပြီး အံကြိတ်ထားသဖြင့် ထိုရှုပ်ထွေးနေသောလူငယ်လေး သည် ဘုရားကျောင်းကို စိတ်ရှုပ်ထွေးလျက်ထားခဲ့ရသဖြင့် အခုထိမပြောင်းလဲနိူင်သေးပါ။ ထို လီဗရယ်နှင့်ကွန်ဆာဗေးတစ်တို့၏ခံယူချက်ဖြစ်သော သမ္မာကျမ်းစာတစ်ခုလုံးကိုအပိုဒ်လိုက် ဖြင့် ဟေဗြနှင့်ဂရိဘာသာတွင်မှုတ်သွင်းပြီး KJV သို့ပြန်ဆိုထားသည်ဟုသောစကားကြောင့် သောကဖြစ်ရပါသည်။ ကျွန်တော်သည် လီဗရယ်ဘာသာပြန်ကျမ်းဖြစ်သော RSV ကိုအသုံးပြု ထားသည် လီဗရယ်ကျမ်းစာကျောင်းနှစ်ကျောင်းသို့ KJV ကျမ်းစာအုပ်ကိုကိုင်လျက်သွားခဲ့ပါ သည်။ ယနေ့ထိတိုင် ထို KJV ကျမ်းစာအုပ်ကို တရားပလ္လင်ပေါ်ထိယူဆောင်ပြီး အစီအစဉ်တိုင်း တွင်တရားဟောလျက်ရှိပါသည်။
Dr. Martyn Lloyd-Jones က အသစ်သောဘာသာပြန်ကျမ်းများကို ကိုင်ဆောင်အ သုံးပြုရမည်ဟုသောအယူအဆသည် “ ဘာမျှမဟုတ်သည်သာမက အဓိပ္ပါယ်လည်းမရှိ” ဟု ဆိုထားပါသည်။ သူက လူတို့သည် သမ္မာကျမ်းစာဖတ်ရှုခြင်းကို ရပ်တန္႔မသွားကြပါ။ သူတို့နား မလည်နိူင်ကြသောကြောင့်မဟုတ်၊ သူတို့မယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်သည် ဟုဆိုထားပါသည်။ သူတို့သည် ၎င်းကိုမှုတ်သွင်းတော်မူသောဘုရားသခင်ကိုမယုံကြည်ကြသောကြောင့်ဖြစ်ပါ သည်။ သူတို့ကြုံတွေ့နေသောပြဿနာမှာ ဘာသာစကားနှင့် ပညာရပ်ဝေါဟာရကြောင့်မ ဟုတ်၊ သူတို့၏စိတ်နှလုံးအခြေအနေကြောင့်သာလျှင်ဖြစ်ပါသည်။” (Martyn Lloyd-Jones, M.D., အချိန်ကာလကိုသိရှိခြင်း၊ The Banner of Truth Trust, ၁၉၈၉၊ စာ- ၁၁၂၊ ၁၁၄ )
ကျွန်တော်အမြဲတစေပြောဆိုလေ့ရှိသည်မှာ ဟေဗြဲနှင့် ဂရိဘာသာစကားရှိ သမ္မာ ကျမ်းစာသည် စာပိုဒ်လိုက်သော်လည်းကောင်း၊ စာလုံးလိုက်သော်လည်းကောင်း ဘုရားသခင် မှုတ်သွင်းတော်မူခြင်းဖြစ်သည် ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ထိုအချက်မှာ ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုသောကျမ်း ပိုဒ်တွင် ရှင်ပေါလု၏ပြောဆိုထားချက်ဖြစ်ပါသည်။
“ထိုကျမ်းစာရှိသမျှသည် ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းတော်မူသောအားဖြင့်ဖြစ်၍၊ ဘုရား သခင်၏လူသည် စုံလင်သောသူ၊ ကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးတို့ကို ပြုစုခြင်းအလို့ငှါ ပြင်ဆင်သောသူဖြစ်မည်အကြောင်း၊ ဩဝါဒပေးခြင်း၊အပြစ်ကို ဖော်ပြခြင်း၊ဖြောင့်မတ် စွာပြုပြင်ခြင်း၊ တရားကိုသွန်သင်ခြင်း၊ ကျေးဇူးများကို ပြုတတ်၏။” ( ၂ တိ ၃း ၁၆၊ ၁၇ )
ကျွန်တော်သည် နှစ်ပေါင်း ခြောက်ဆယ်နီးနီး တရားဟောခဲ့ပြီးပြီ။ ပြောင်းလဲမှုများကို ဂရုမစိုက် ပါ။ ထိုအရာကို အသုံးပြုပါ၊ သို့မဟုတ် ဖယ်ထားပါ။ ထိုအရာမှာ သမ္မာကျမ်းစာမိန့်ဆိုသောအ ရာပင်ဖြစ်ပါသည်။
၁။ ပထမအချက် - သမ္မာကျမ်းစာသည် “ ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းတော်မူကြောင်း” ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။
“မှုတ်သွင်းခြင်း” ဟူသော ဂရိစကားလုံးမှာ “ ထီအိုနယူးစတော့စ်” ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအ ရာမှာ “ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းသည်” ဟုဆိုလိုသတည်း။ သန့်ရှင်းသောသမ္မာကျမ်းစာသည် “ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းတော်မူသော” အရာဖြစ်ပါသည်။ တမန်တော်ရှင်ပေတရုက သမ္မာကျမ်း စာရေးသားသူများကို “သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏တိုက်တွန်းတော်မူခြင်းကိုခံရ၍” ဟုဆို ထားပါသည်။ ( ၂ ပေ ၁း ၂၁ ) “တိုက်တွန်းသည်” ဟူသောဂရိစကားလုံးသည် “ဖာရို”မှဆင်း သက်လာပြီး “သယ်ဆောင်သည်” ဟုအဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။ ၂ တိ ၃း ၁၆ နှင့် ၂ ပေ ၁း ၂၁ ကို ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုသောအခါ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းတော် မူသောကျမ်းစာကိုရေးချသည်တိုင် စာရေးသူတို့၏စိတ်နှလုံးကို ချီမသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဥပမာ အားဖြင့် ယေရမိ ၁း ၉ ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုကြပါစို့။
“သခင်ဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ သင့်၏နှုတ်၌ ငါ့စကားကိုငါသွင်းထား ပြီ ဟုမိန့်တော်မူသည်” (( ယေရမိ ၁း ၉ )
ယေရှုကိုယ်တိုင်ကလည်း အောက်ပါအတိုင်းမိန့်ဆိုသောအခါ ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှုတ်သွင်းခြင်းအ ကြောင်းကိုကြိုတင်ဟောကြားတော်မူခဲ့သည်။
“ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးမတည်သော်လည်း ငါ့စကားတည်လိမ့်မည်။” ( မာကု ၁၃း ၃၁ )
သမ္မာကျမ်းစာထဲက အယူအဆများသည် ဘုရားသခင်ပေးထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ သမ္မာကျမ်းစာ ထဲက အတွေးအခေါ်များသည်လည်း ဘုရားသခင်ပေးထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်မှုတ် သွင်းထားသည်မှာ စကားလုံးများ ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က ရေးသားသူ တို့အား သွင်းထားတော်မူသောအရာမှာ စကားလုံးများပင်ဖြစ်သည်။ တရားစီရင်ခြင်းကိုယူ ဆောင်လာသောအရာမှာ သမ္မာကျမ်းစာထဲကစကားလုံးများကိုဆန့်ကျင်ခြင်းဖြစ်သည်။ “အ ကြောင်းမှာ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏စကားများကို ဆန့်ကျင်ကြသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။” (ဆာလံ ၁၀၇း ၁၁ )
ဆိုးသွင်းမိုက်မဲသောရှင်ဘုရာယောယကိမ်မင်းက ဗာရုတ်အား ယေရမိကျမ်းစာရရှိ သောနေရာကိုမေးမြန်းခဲ့သည်။ ဗာရုတ်က ပရောဖက်က “`ဤစကားအလုံးစုံတို့ကို နှုတ်မြွတ်၍၊ အကျွန်ုပ်သည် မှင်နှင့်ရေးထားပါ၏” ဟုပြန်ဖြေလေသည်။ ( ယေရမိ ၃၆း ၁၈ ) စကားလုံးများသည် မှုတ်သွင်းထားခြင်းမရှိဟုဆိုသောသူတိုင်းကို မယုံကြည်ပါနှင့်။ ဓမ္မဟောင်း ဟေဗြဲစကားလုံးများနှင့် ဓမ္မသစ်ဂရိစကားလုံးများဖြစ်သည့် သမ္မာကျမ်းတစ်ခုလုံးရှိစကားလုံး တစ်ခုစီတိုင်းသည် “ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းထားသော” စကားလုံးဖြစ်သည်။ “ထိုကျမ်းစာရှိသမျှ သည်ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းထားခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။” (၂ တိ ၃း ၁၆ ) ထိုအချက်က ကျွန်ုပ်တို့အား အခြားအချက်ဆီသို့သွားစေပါသည်။
၂။ ဒုတိယအချက် - ကျမ်းစာရှိသမျှသည် ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းထားခြင်းဖြစ် သည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
“ထိုကျမ်းစာရှိသမျှသည် ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းတော်မူသောအားဖြင့်ဖြစ်၍၊…” (၂ တိ ၃း ၁၆ )
ဆိုလိုသည်မှာ ကမ္ဘာဦးကျမ်းမှ ဗျာဒိတ်ကျမ်းတိုင်အောင် ဟေဗြဲနှင့် ဂရိကျမ်းစာအုပ်ရှိစကားလုံး တိုင်းသည် ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းတော်မူသောစကားလုံးဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုပေသည်။ ထိုအရာကို ပညာရှင်များက “ကျမ်းစာပိုဒ်အလိုက်၊ စကားလုံးအလိုက် မှုတ်သွင်ခြင်း” ဟုဆိုကြ သည်။ “စကားလုံး”ဟူသည်မှာ “စကားလုံးများ” မှုတ်သွင်ခြင်းဖြစ်ပြီး “ကျမ်းစာအလိုက်” “ကျမ်းစာတစ်ခုလုံး”မှုတ်သွင်းခြင်းကိုဆိုလိုသတည်း။ ကျမ်းစာတစ်ခုလုံးကို ဘုရားသခင်မှုတ် သွင်းတော်မူသည်။
Texas ပြည်နယ် ပထမဆုံးဒါလခ်စ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၏သင်းအုပ်ဆရာကြီးဖြစ်သူ Dr. W. A. Criswell က ဤသို့ဆိုထားပါသည်။
“ကျမ်းစာတစ်ခုလုံးကိုမှုတ်သွင်းထားပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာမှာ ထီအိုနိူတော့စ်ဖြစ် သည်။ အားလုံးကိုဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းထားတော်မူသည်။ စကားလုံးတိုင်းသည် အနှစ်သာရတူညီသည်ဖြစ်၍ အသေးကလေးမှစ၍ စကားလုံးတိုင်းကိုမှုတ်သွင်း ထားတော်မူသည်….” (W. A. Criswell, Ph.D., The Bible for Today’s World, Zondervan Publishing House, ၁၉၆၇၊ စာ- ၄၉ )
စာလုံးဗိန္ဓုတလုံးမျှပြည့်စုံခြင်းသို့မရောက်မှီ မပျက်စီးရ။” (မဿဲ ၅း ၁၈ )
ဗိန္ဓုတစ်လုံးဟူသည်မှာ ဟေဗြဲစာလုံးတွင်အသေးဆုံးဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ကော်မာကဲ့သို့သော အမှတ်အသားငယ်ဖြစ်ပါသည်။ ဟေဗြဲစလုံးတွင် အသေးငယ်ဆုံးသော အချက်ပြလေးသာဖြစ် ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ၎င်း၏သမ္မာကျမ်းစာမှုတ်သွင်းခြင်းတွင် ထိုသေးငယ်သောဟေဗြဲ စကားလုံးလေးကိုပင်အသုံးပြုထားပါသည်။
ကျွန်တော်သည် ကျမ်းစာအုပ်ကို လက်ထဲတွင်ကိုင်ဆောင်သောအခါတွင် အကြီးမား ဆုံးသောဘဏ္ဍာကို ကိုင်ဆောင်နေခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘု ရား၏နှုတ်ကပါတ်တော်သည် စလုံးတစ်လုံးချင်းစီကိုမှုတ်သွင်းတော်မူခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အ ကြောင်းအရာတစ်ခုနှင့်ပါတ်သက်၍ ဘုရားသခင်၏ထင်မြင်ချက်ကို ကျွန်တော်သိလိုသောအ ချိန်တွင် အခြားတွေးခေါ်ပညာရှင်များ၏အတွေးအခေါ် သို့မဟုတ် လောကပညာရှင်တို့၏အ တွေးအခေါ်ကိုလ်ိုက်ရှာနေစရာပင်မလိုအပ်ပေ။ အကြောင်းအရာနှင့်ပါတ်သက်ပြီး ဘုရားသခင် ၏ထင်မြင်ချက်ကိုသိလိုသောအခါ ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းတော်မူသောကျွန်ုပ်၏ကျမ်းစာအုပ်ကို ဖွင့်ဖတ်ပါသည်။ ကျွန်တော်သည် စကားလုံးများကို “လိမ်ဆွဲ”မထားပါ။သူတို့၏ရှင်းလင်းသော အဓိပ္ပါယ်အတိုင်းသာအသုံးပြုထားပါသည်။ ဘုရားသခင်က သစ်ပင်ဟုဆိုသောအခါ သစ်ပင်ဟုသာအဓိပ္ပါယ်ရှိပြီး ယဇ်ပလ္လင်ဟုဆိုသောအခါ ယဇ်ပလ္လင်ဟုသာအဓိပ္ပါယ်ရှိပါသည်။
Dr. MacArthur အကြောင်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်ကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်စေသည်။ သူ၌ပြောပြစရာကောင်းသောအရာအများကြီးရှိပါသည်။ သို့သော သူက “အသွေးတော်ကို သေခြင်းစလုံးအတွက်အစားထိုးအသုံးပြုထားသည်” ဟုဆိုထားပါသည်။ (The MacArthur Study Bible; ဟေဗြဲ ၉း ၁၄ နှင့်ပါတ်သက်သောမှတ်စု ) သူသည် စကားလုံးများနှင့်ပါတ်သက် ၍ပြောဆိုသောအခါ “အဘယ်မျှသောခရစ်တော်၏အသွေးတော်သည် သင်၏ဩတ္တပ္ပစိတ်ကို ကောင်းမုကုသိုမှ အဘယ်မျှလောက်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေပါသနည်း” ဟုဆိုပါသည်။ကျွန်တော် ကကျမ်းစာတစ်ခုလုံးမှုတ်သွင်းထားသည်ကို လက်ခံယုံကြည်သည်ဖြစ်၍ သူပြောဆိုသောအ ရာကို မှန်သည်ဟုမထင်ပါ။ သူက ခရစ်တော်၏ “အသွေးတော်” သည် “သေခြင်းကို ကိုယ်စား ပြုထားသည်” ဟုဆိုပါသည်။ မှားယွင်းသောရပ်တည်မှုပင်ဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်တော်၏သေခြင်း ကကျွန်တော်တို့၏မကောင်းသောအရာများကို သန့်စင်စေနိူင်သည်မဟုတ်။ ခရစ်တော်၏အ သွေးတော်ကသာလျှင္ သန့်စင်စေပါသည်။ သူ၏မှားယွင်းမှုကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စကားလုံး တိုင်းသည်မှုတ်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပြီး အရေးကြီးလှသည်ကိုသိရှိရန်ဖြစ်သည်။ ဟေဗြဲ ၉း ၁၄ ၏ဂရိစကားလုံးမှာ “ဟိုင်မာ” ဖြစ်ပြီး အဓိပ္ပါယ်မှာ “အသွေးတော်” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် တို့၏အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွင် “ဟမိုဟတ်”ဖြစ်ပြီး ထိုအရာမှာ ဂရိစကားလုံးမှ ဆင်းသက်လာ သည်။ ဆေးပညာအရာ “ဟာမာတိုလော်ဂျီ” မှာ အသွေးတော်အကြောင်းလေ့လာခြင်းဖြစ် သည်။ ဤအင်္ဂလိပ်စကားလုံးနှစ်လုံးစလုံးသည် ဂရိစကားလုံး “ဟိုင်မာ” မှဆင်းသက်လာ သည်။ ဤအရာက Dr. MacArthur သည် “အသွေးသည် သေခြင်းကို ကိုယ်စားပြုသည်”ဟု ဆိုသောအခါ မှားယွင်းကြောင်းကို ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားပါသည်။ ထိုသို့မဟုတ်။ ဂရိစကား လုံး ဟိုင်မာမှာ အသွေးတော်ဟုဆိုလိုပေသည်။ “သေခြင်း” ဟုမဆိုလိုပါ။ သေခြင်းဟူသော ဂရိစကားလုံးမှာ “တနာသော့စ်”ဖြစ်သည်။ ထိုအရာကို အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွင် “အင်ရူတန်ဆီ ရား”ဟုလာသည်။ “ထာနာ” ၏အင်္ဂလိပ်စကားလုံးမှာ “ထာနာတို့စ်” မှဆင်းသက်လာပြီး “သေ ခြင်း” ဟုဆိုလိုပါသည်။ “Eu” သည် ဂရိစကားလုံးတွင် “ကောင်းသော” ဟုအဓိပ္ပါယ်ရပြီး “အင်တာနာဆီရား” မှာ “ကောင်းသောသေခြင်း’’ ဟုဆိုလိုသည်။ ထိုအရာမှာ လီဗရယ်များက မိမိကိုယ်ကိုသေကြောင်းကြံသူများကို အကူအညီပေးသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ “ဟိုင်မာ”မှာ အသွေးဖြစ်ပြီး “တန်နာတို့စ်”မှာ သေခြင်းဖြစ်သည်။ “အသွေးသည် သေခြင်းကိုပုံဆောင်သည် ဟုဆိုရာတွင်” Dr. MacArthur သည် မှားယွင်းပေသည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုက “အသွေး” တော်ကိုသာဆိုလိုပါသည်။ သူက “သေခြင်း” ကိုသာပြောဆိုလိုလျှင် “တန်နာတိုစ်” ကိုသာ အသုံးပြုပေမည်။ The Reformation Study Bible က “မူရင်းစာရေးသူဖော်ပြသောအဓိပ္ပါယ် ကိုငြင်းပယ်ထားသောအဘယ်စိတ်ကူးယဉ်နည်းလမ်းမျှ မကိုက်ညီ” ဟုဆိုထားပါသည်။ ( စာ-၈၄၄ “ဘုရားနှုတ်ကပါတ်တော်နားလည်ခြင်း” နှင့်ပါတ်သက်သည့်မှတ်စု ) Dr. MacArthur သည် Colonel R. B. Thieme ထံမှ “အသွေး”ကု “သေခြင်း” ဟုပြောင်းလဲရန်သင်ယူခြင်းဖြစ် နိူင်ပါသည်။ ကျွန်တော်သည် ၁၉၆၁မိုးရာသီတွင်ရှိသဖြင့် မျက်မြင်သက်သေပင်ဖြစ်ပါသည်။ လူငယ်လေး John MacArthur က သူ၏မှတ်စုထဲတွင် Thieme ပြောသကဲ့သို့ “ အသွေးတော် သည် သေခြင်းကိုယ်စားအသုံးပြုထားသည်” ကို တိတိကျကျမှတ်သားထားသည်ကို ကျွန် တော်မြင်တွေ့ခဲ့ပါသည်။ Colonel Thieme သည်ထိုအချက်တွင်မှားယွင်းကြောင်း ပညာရှင် များစွာကသိကြသည်။ Colonel Thieme သည် ခရစ်တော်၏အသွေးတော်ကို သဘောမကျ သည့် အရာရှိဟန်တူသည်။ ထို့အပြင် သူ၏အမှားသည် Dr. MacArthur အထိရောက်လာ သည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ဂရိစကားလုံးတစ်လုံးကို အခြားစကားလုံးအဓိပ္ပါယ်ရှိရန်မလုပ် ဆောင်ရပါ။ “မူရင်းစာရေးသူ၏ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပါယ်” ကိုလစ်လျှမရှုသင့်ပါ။ (Reformation Study Bible, ၎င်း )
ကျွန်တော်တို့က ကျမ်းစာတစ်ခုလုံးကိုမှုတ်သွင်းထားသည်ဟူသော ဟေဗြဲနှင့်ဂရိဘာ သာရှိကျမ်းစာစကားလုံးတိုင်းကို ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းထားသည်ဟူသောသွန်သင်ချက်၏အ ရေးကြီးမှုကို ဥပမာအားဖြင့်ဖော်ပြရန် Thieme နှင့် MacArthur တို့၏ပြဿနာကို အမြဲအသုံး ပြုလေ့ရှိကြသည်။
Dr. Harold Lindsell သည် ပညာရှင်ကြီးဖြစ်ပြီး သမ္မာကျမ်းစာ၏အမှားအယွင်းမရှိမှု ကိုလည်းခုခံကာကွယ်နိူင်သူဖြစ်ပါသည်။ The Battle for the Bible ဟူသောသူ၏စာအုပ် သည် ယနေ့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကာလတွင်မဖြစ်မနေကိုင်ဆောင်သင့်သည့်အရာဖြစ်သည်။ Dr. Lindsell က “မှုတ်သွင်းခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ရေးသားထားသောအပိုင်းတိုင်းနှင့်သက် ဆိုင်ပြီး ရွေးချယ်ထားသောကျမ်းစာစကားလုံးတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လမ်းပြမှု လည်းပါဝင်ပေသည်” ဟုဆိုပါသည်။ (Harold Lindsell, Ph.D., The Battle for the Bible, Zondervan ပုံနှိပ်တိုက်၊ ၁၉၇၈၊ စာ-၃၁) Dr. Lindsell က သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် စာရေးသူတို့ကိုစောင့်ထိန်းသည် “ ကျမ်းစာထဲရှိစကားလုံးများကိုရွေးချယ်ခြင်းတွင်လည်း” ဟု ဆိုရာတွင် ဂရိနှင့်ဟေဗြဲစကားလုံးများကိုရည်ညွှန်းထားပါသည်။ Dr. Henry M. Morris က ရှင်ပေါလုသည် ဂလာတိ ၃း ၁၆ တွင် “သမ္မာကျမ်းစာရှိစကားလုံးတိုင်းမှုတ်သွင်းခြင်း”ကို ခိုင်မာစွာတင်ပြထားသည်ဟူဆိုထားပါသည်။ (Henry M. Morris, Ph.D., The Defender’s Study Bible, World ပုံနှိပ်တိုက်၊ ၁၉၉၅၊စာ-၁၂၉၅၊ ဂလာတိ ၃း ၁၆ နှင့်ပါတ်သက်၍ မှတ်စ )
ကျွန်တော်သည် Dr. Lindsell နှင့် Dr. Morris တို့ကို အပြည့်အဝထောက်ခံထားပါ သည်။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးမှန်ကန်ပါသည်။ ထိုအရာမှာ Dr. MacArthur ၏ “ အသွေးသည် သေးခြင်းကို ကိုယ်စားပြုသည်” ဟူသောဖော်ပြချက်ကို ငြင်းပယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ သည် သမ္မာကျမ်းစာကို အမှန်တကယ်ယုံကြည်လက်ခံလျှင် ထိုသို့ပြုမည်မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်သည် ကျမ်းစာထဲတွင်ပြောသောအရာကို ဆိုလိုထားပါသည်။ ဟေဗြဲနှင့် ဂရိကျမ်း စာ၌ဘုရားသခင်ပြောသောအရာကို သင်သည်အပြည့်အဝယုံကြည်၍ရပါသည်။ ယေရှုက “လူသည်မုန့်အားဖြင့် အသက်မွေးရသည်မဟုတ်၊ ဘုရားသခင်၏စကားအားဖြင့်အသက်ရှင်ရ ၏” ဟုဆိုထားပါသည်။ ( မဿဲ ၄း ၄၊ခရစ်တော်က တရားဟောရာကျမ်း ၈း ၃ကိုကိုးကားထား ပါသည်။ )
သင်သည် ကျမ်းစာကိုဖတ်သောအခါတွင် ဘုရားသခင်၏စကားကိုဖတ်ရှုနေသည်ကို သတိပြုပါ။ သင်သည် ကျမ်းစာကိုဖတ်သောအခါ “ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပါ၊ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်။” သင်သည် တမန်တော် ၁၆း ၃၁တွင်တွေ့ရသကဲ့သို့ ဘုရားသခင်၏စကား ကိုယုံကြည်နိူင်ပါသည်။ သင်သည် “သခင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံလျှင်” ဘုရားသခင်၏ သားတော်အားဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်တော်မူလိမ့်မည်။ သင်သည် ခရစ်တော်၏ စကားဖြစ်သည့် “ငါထံသို့လာသောသူကိုငါသည်အလျင်းမပယ်” ဟူသောစကားကိုဖတ်ရှုသော အခါ သူထံပါးသို့လာသောအခါ ယေရှုကအလျင်းပယ်တော်မမူမည်အကြောင်းကို စိတ်ချနိူင်ပါ သည်။ ( ယောဟန် ၆း ၃၇ ) သင်သည် ခရစ်တော်၏စကား “ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူအ ပေါင်းတို့ငါ့ထံသို့လာကြလော့။ ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်” ဟူသောစကားကိုဖတ်ရသောအခါ ခရစ်တော်ထံပါးသို့လာသောအခါချမ်းသာရမည်ကို စိတ်ချနိူင်ပါသည်။ (မဿဲ ၁၁း ၂၈ ) သင်သည်ယေရှု၏စကား “ဘုရားသခင်၏သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်၊ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းငှါ၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌ တပါးတည်း သောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏” ဟူသောစ ကားကိုဖတ်ရသောအခါ သူ့ကိုယုံကြည်လျှင် အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုမခံရဘဲ ထာဝရအသက်ရ တော်မူမည်ကိုစိတ်ချနိူင်ပါသည်။( ယောဟန် ၃း ၁၆ ) “ခရစ်တော်၏အသွေးတော်သည် သင်၏အပြစ်ကိုဆေးကြောတော်မူသည်” ဟူသောစကားကိုဖတ်ရှုရသောအခါ “ခရစ်တော်၏ အသွေးတော်” သည် သင့်အား “အပြစ်အားလုံး” မှဆေးကြောကယ်ချွန်နိူင်ကြောင်းစိတ်ချနိူင်ပါ သည်။ ( ၁ ယောဟန် ၁း ၇ )
“ထိုကျမ်းစာရှိသမျှသည် ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းတော်မူသောအားဖြင့်ဖြစ်၍၊ ဘုရား သခင်၏လူသည် စုံလင်သောသူ၊ ကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးတို့ကို ပြုစုခြင်းအလို့ငှါ ပြင်ဆင်သောသူဖြစ်မည်အကြောင်း၊ ဩဝါဒပေးခြင်း၊အပြစ်ကို ဖော်ပြခြင်း၊ဖြောင့်မတ် စွာပြုပြင်ခြင်း၊ တရားကိုသွန်သင်ခြင်း၊ ကျေးဇူးများကို ပြုတတ်၏။” (၂ တိ ၃း ၁၆၊ ၁၇)
သမ္မာကျမ်းစာထဲရှိစကားလုံးသည် မှန်ကန်ကြောင်း သင်ယုံကြည်လျှင် ယေရှုကိုအား ကိုးပြီး ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့အဘယ့်ကြောင့်မရောက်မည်နည်း။ ဘုရားသခင်၏စကားကို အမှန်တကယ်ယုံကြည်လျှင် သင့်ကိုအပြစ်၊ သေခြင်းနှင့်ငရဲမှကယ်တင်ရန် လက်ဝါးကပ်တိုင် တွင်အသေခံသည့်တိုင်သင့်အားချစ်တော်မူသောသားတော်ထံပါးသို့ချဉ်းကပ်၍ ယုံကြည်ကိုး စားပါ။ ဓမ္မသီချင်းဟောင်းရှိစကားလုံးကို သီဆိုပါ။
(“ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်လာသည၊်” Lewis Hartsough ၁၈၂၈-၁၉၁၉ ရေးစပ်သည်။ )
အာမင်…။ Dr. Chan ကျေးဇူးပြု၍ဆုတောင်းပေးပါ။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ ကျမ်းစာဖတ်ကြားခြင်းကို Mr. Abel Prudhomme ကဆောင်ရွက်သည်။ ၂တိ ၃း ၁၂-၁၇
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ Mr. Benjamin Kincaid Griffith ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းသည်၊ “သမ္မာကျမ်းစာမှန်ကန်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိ”၊ (Dr. B. B McKinney ၁၈၈၆-၁၉၅၂ ရေးစပ်သည်။ )
“ထိုကျမ်းစာရှိသမျှသည် ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းတော်မူသောအားဖြင့်ဖြစ်၍၊ ဘုရားသခင်၏လူသည် စုံလင်သောသူ၊ ကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးတို့ကို ပြုစုခြင်းအလို့ငှါပြင်ဆင်သောသူဖြစ်မည်အကြောင်း၊ ဩဝါဒပေးခြင်း၊အပြစ်ကို ဖော်ပြခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်စွာပြုပြင်ခြင်း၊ တရားကိုသွန်သင်ခြင်း၊ ကျေးဇူးများကို ပြုတတ်၏။” (၂ တိ ၃း ၁၆၊ ၁၇ )
၁။	ပထမအချက် - သမ္မာကျမ်းစာသည် “ ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းတော်မူကြောင်း” ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ ၂ပေ ၁း ၂၁၊ ယေရမိ ၁း ၉၊ မာကု ၁၃း ၃၁၊ဆာလံ ၁၀၇း ၁၁၊ ယေရမိ ၃၆း ၁၈။
၂။	ဒုတိယအချက် - ကျမ်းစာရှိသမှ်သည် ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ မဿဲ ၅း ၁၈၊ ၄း ၄၊ တမန်တော် ၁၆း ၃၁ယာ ၆း၃၇၊ မဿဲ ၁၁း ၂၈။ ယော ၃း ၁၆၊ ၁ ယော ၁း ၇